कस्तो रेष्टुरेन्ट ? जहाँ थालमा होइन तरुनीको नांगो जिउमा खाना दिइन्छ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← मन्त्री रोएपछि आत्महत्याको प्रयास !
अनिश्चितकालीन यातायात हड्ताल गर्ने चेतावनी →
सम्झनुहोस् तपाइँ कुनै रेष्टुरेन्टमा खान खान जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ तपाइँलाई कुनै प्लेटमा होइन नांगा तरुनीका जिउमा खानेकुरा राखेर टक्राइन्छ भने तपाइँलाई कस्तो अनुभुति होला ? वास्तवमा यस्तो हुनै नहुने बकमफुस्से कुराको कल्पना किन गर्नु भन्ने तपाइँलाई लाग्नसक्छ । तर यो कुनै कल्पनाको कुरा होइन । अमेरिकाको एक रेष्टुरेन्टले अब नांगा मोडेलका सरीरमा खाना टक्राएर ग्राहकको भोट मेटाउने भएको छ ।
अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित एक रेस्टुरेन्टले यस्तो सुविधा दिने भएको हो । जापानी परिकार खुवाउने उक्त रेस्टुरेन्टमा अब ५ सय डलर तिरेपछि अगाडि तेर्सिएका नांगा मोडेलको छाति तथा गुप्तांगमाथि राखिएको भोजन कपाकप खान पाइनेछ । यसरी नांगा मोडेलका छातिमाथिबाट सुशी तथा साशिमी जस्ता जापानी भोजन टप्प टिपेर खाने इच्छा भएमा गोजी केही गरम पारेर मियामीको कुंग फु किचेन रेष्टुरेन्टमा गए पुग्छ ।
उक्त रेष्टुरेन्टका मालिक नाथन लिबरम्यानले आफुले यस्तो सेवा प्रदान गर्ने मोडेलहरु मोडलिङ एजेन्सीबाट भाडामा ल्याउन थालेको भन्दै अहिले रेष्टुरेन्टमा काम गरिरहेका केही युवतीहरु समेत ग्राहकलाई आफ्नो नांगो जिउमा खाना खुवाउन तयार भएका बताएका छन् ।
तर यो रेष्टुरेन्टमा नांगा मोडेलको सरीरलाई थाल बनाएर खाना खाँदा केही नियम भने पूराउननै पर्छ । ग्राहकले हात राम्ररी सफा गरेको हुनुपर्छ भने हातले केवल खानेकुरा मात्र टिप्न पाइन्छ तरुनीको जिउमा बढि छुन पाइन्न । स्मरण रहोस् यसरी नांगो जिउमा खाना खुवाउने मोडेलहरुको गुप्तांग केराको पातले ढाकिएको हुन्छ भने स्तनमाथि पनि भाँडो राखिएको हुन्छ ।